Air ရှိ App - ခရီးသွားစီစဉ်သူနှင့် Flight tracker Android အတွက် APK ဒေါင်းလုပ်
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » အဆိုပါလေတပ်အတွက် App ကို - ခရီးသွားစီမံ & ပျံသန်းမှု tracker
ခရီးသွားစီမံ & ပျံသန်းမှု tracker APK ကို - ထိုလေတပ်အတွက် App ကို
အဆိုပါလေတပ်အတွက် App ကို - သင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပျံလက်ထောက် သင်၏လေယာဉ်ခရီးစဉ်နှင့်အတူကို up-to-date ဖြစ်အောင်သင်ကစောင့်ရှောက်: အစစ်အမှန်အချိန် status ကိုလေဆိပ်အကြံပေးချက်များနှင့် In-လေဆိပ်အညွှန်းမြေပုံများ, အားလုံးသင့်ရဲ့လေယာဉ်ခရီးစဉ်များနှင့်အတူလေယာဉ်ခရီးစဉ်ပရိုဖိုင်းကို logged ။ ဒါဟာအစခြေရာခံစောင့်ရှောက် သစ္စာရှိမှုအစီအစဉ်များ: မကြာခဏလက်ကမ်းကြော်ငြာမိုင်ငွေပမာဏကိုသင်တို့ပြေးရသောသမိုင်းတင်သွင်း, ပြောင်းလဲစေပါသည်။
ပို. ပင်: app ကို အော့ဖ်လိုင်းအလုပ်လုပ်တယ် (တံခါးဝအပြောင်းအလဲများနှင့်လေယာဉ်ခရီးစဉ် status ကိုမွမ်းမံမှုများမပါဒေတာရိုမင်းလိုအပ်ပါတယ်ထားတဲ့ SMS ကိုမှတဆင့်ကယ်နှုတ်တော်မူ၏ကြသည်) ။ ငါတို့သည်လည်း Samsung ရဲ့ Galaxy စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့, ဂီယာ S3 နှင့် Android Wear app ကို, သူတို့ကိုကြိုးစားရန်မမေ့မလြော့ပါပွီ!
အလိုအလျောက် check-in။ ကြွင်းသောအရာကျွန်တော်တို့ကိုအပေါ်ဖြစ်ပါသည်, ပြန်ထိုင်ပြီးအနားယူ။ အလိုအလျောက် check-in2ခရီးသည်များအတွက်: သင်နိုင် အလိုအလျောက် check-in အဘို့ဒုတိယခရီးသည် add ဖြစ်နိုင်လျှင်ကျနော်တို့အတူတူသင်၌စစ်ဆေးပါလိမ့်မယ်။
အတွက် Featured Business Insider ရဲ့ 100 အကြီးမြတ်ဆုံး Apps ကပ နှင့် "သင့်ရဲ့အခနျးငယျ" စီးပွားဖြစ်။
- မြောက်အမေရိကလေကြောင်းလိုင်း: အမေရိကန်, မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသ, ယူနိုက်တက်, အနောက်တောင်ပိုင်း, Air ကိုကနေဒါ, JetBlue, Alaska, WestJet, Aeromexico, ဝိညာဉ်တော်အား & အများကြီးပို
- ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း 1000 လေကြောင်းလိုင်းများကျော်: KLM, Ryanair, တရုတ်အရှေ့ပိုင်း, Lufthansa, LATAM, တရုတ်တောင်ပိုင်း, easyJet, စင်္ကာပူလေကြောင်းလိုင်း, ဗြိတိသျှလေကြောင်းလိုင်းနှင့်အခြားသူများ
- အားလုံးအဓိကအမေရိကန်လေဆိပ်: Hartsfield-Jackson က (ATL), Los Angeles မြို့ (တွေကလည်းလျော့ရဲရဲ), အိုဟဲ (ORD), Dallas မြို့က / ဝိန်း Fort Worth (DFW), Denver အင်တာနေရှင်နယ် (Den), ဂျွန်အက်ဖ်ကနေဒီမလုပ်ကြံခံရအင်တာနေရှင်နယ် (တွေအတိုင်း), စန်း Francisco ကအင်တာနေရှင်နယ် (SFO), Charlotte (CLT) နှင့်အများကြီးပို
- အလုပ်အများဆုံးကမ္ဘာကြီးလေဆိပ် - 5000 ကျော်: Heathrow, ဘေဂျင်း, Haneda, ဒူဘိုင်း, ပဲရစ်-Charles de Gaulle, ဟောင်ကောင်, Frankfurt, အစ္စတန်ဘူလ်, Soekarno-Hatta နှင့်အခြားသူများ
- အားလုံးမဟာမိတ်ဖွဲ့: Skyteam, စတားမဟာမိတ်အဖွဲ့, Oneworld
- သင့်ပျံသန်းလက်လွတ်မနေပါနဲ့ - ငါတို့သည်ပင်အင်တာနက်ကိုမပါဘဲမယ့်လေယာဉ်ခရီးစဉ်အတွက်မည်သည့်အပြောင်းအလဲများအကြောင်းသင့်သတိပေးပါလိမ့်မယ်!
- တစ်ဦးလေဆိပ်မှာသင်၏အချိန်ကိုစီမံခန့်ခွဲ - တစ်ဦးချင်းစီပျံသန်း4အဆင့်သို့ကျိုးပဲ့ခဲ့ပြီး: စစ်ဆေး-In / ဘော်ဒါ / takeoff / ဆင်းသက်အချိန်
- ဆွေမျိုးများနှင့် ပတ်သက်. စောင့်ရှောက်? သင်လည်းသူတို့ရဲ့လေယာဉ်ခရီးစဉ်ကိုခြေရာခံနိုင်ပါတယ်။
- ဖြောင့် app မှအွန်လိုင်း check-in ဖွင့်အကြောင်းကိုသတိပေးချက်များ - လေယာဉ်ပေါ်မှအကောင်းဆုံးထိုင်ခုံရဖို့အခွင့်အလမ်းကိုယူပါ။
- တခြားခရီးသွားမှတ်တမ်း, နေရာလေးကိုအကြံပေးချက်များနှင့်ဘာ9000 ကွဲပြားခြားနားသောလေဆိပ်မျှော်လင့်ထံမှအကြံဉာဏ်များ - စားရန်နေရာများ, အင်တာနက်စကားဝှက်ည TSA လုံခြုံရေးအကြံပေးချက်များနှင့်လမ်းညွှန်ချက်များကိုရှာပါ။
- စာအုပ်လေဆိပ်နားနေခန်းနှင့် Android Pay ကိုသူတို့နှင့်အတူဖို့ဝယ်ယူသုံးစွဲနိုင်
- မြို့ကိုဘယ်လိုသွားရမလဲမသိကြသလော ကျနော်တို့ကတက္ကစီစာအုပ်ဆိုင်မှအမြန်လင့်များ (200 မြို့ကြီးများထက် ပို. ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း) သို့မဟုတ်အမြန်မီးရထား (ယခုများအတွက်မော်စကို Aeroexpress & Heathrow Express ကို) ရှိ
- TripIt ပေါင်းစည်းမှုသင်သည်သင်၏ခရီးစဉ်များနှင့်အပြန်အလှန်တင်သွင်းဖို့ခွင့်ပြု: ချောချောမွေ့မွေ့လေအတွက် TripIt နှင့် App ကိုဖြတ်ပြီးသင့်ရဲ့ခရီးစဉ်တွေကိုတပြိုင်တည်းအလုပ်လုပ်
- myflight@appintheair.mobi မှရှေ့သို့ဘွတ်ကင်အတည်ပြုချက်အီးမေးလ်
- သင်ပျံသန်းင့်ခြင်းနှင့်လေဆိပ်, လေကြောင်းလိုင်း & လေယာဉ်ပျံသင်သွားရောက်ခဲ့ပြီးတော့နှင့်တံဆိပ်များဝင်ငွေနာရီ, မိုင် Count
နှစ်စဉ်ကြေးပေးသွင်း ($ 29.99) ကို SMS ကနေတဆင့်သင့်ရဲ့မိသားစုစာရင်းသွင်းရန်သင့်ကို real-time ပျံသန်း status ကိုနောက်ဆုံးသတင်းများ, အလိုအလျောက် check-in များနှင့် option ကိုပေးသည်။ သင်၏ပဌမအနှစ် subscription ကိုသင်ကသင်၏ဝယ်ယူမှုအတည်ပြုတစ်ချိန်ကအကောင့် Play သင်၏ Google မှတရားစွဲဆိုလိမ့်မည်။
- app ကိုအတူပြဿနာရှိပါသလား? - ငါတို့သည်အီးမေးလ်ကနေတဆင့်ပံ့ပိုးမှုရှိသည်။
- အလှမယ်အချို့သောလေဆိပ် / လေကြောင်းလိုင်းများ / features တွေ? - ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူများသည်ကိုနားထောင်သည် 2-3 ရက်သတ္တပတ်အသစ်က updates များကိုလွှတ်ပေးရန်။
မေးခွန်းများ? support@appintheair.mobi အပေါ်အချိန်မရွေးရေးသားဖို့အခမဲ့ခံစားရ
- နယူး Android Wear app ကို
- အသေးစိတ်စာရင်းဇယားမျက်နှာပြင်အသွင်အပြင်တိုးတက်လာ, foldable ဖန်သားပြင်ကဆက်ပြောသည်ပံ့ပိုး
ပွတ်ဆွဲသူတို့ကို "လူတွေက" သူတို့ကို assign မှ "ကျွန်မ" ပွတ်ဆွဲညာဘက်အောင် left: - သင့်ရဲ့ unsorted ပျံသန်းမှုတက်ကိုရှင်းလင်း
- လောတ၏အသုံးပြုသူရဲ့တုံ့ပြန်ချက်၏လုပ်ငန်းများ၌ & တိုးတက်
သငျသညျစတိုးဆိုင်၌အကြှနျုပျတို့၏ app ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ 20 စက္ကန့်ကိုယူလျှင်ကျနော်တို့အလွန်တန်ဖိုးထားင် - ဤတကယ်ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပေးသည်!
အဆိုပါလေတပ်အတွက် App ကို - ခရီးသွားစီမံ & ပျံသန်းမှု tracker
27.92 ကို MB
အဆိုပါလေကြောင်း, Inc အတွက် App ကို
လေကြောင်းလိုင်း Manager က ...
Sago Mini ကိုကမ္ဘာ့ဖလား